Voankazo sy legioma, mahavoan’ny homamiadana raha tsy voasasa tsara !
Tsy ny loto ihany no mankarary fa ny fanafody famonoana bibikely amin’ny voankazo na legioma hanina manta ihany koa.
Na mbola zezika biôlôjika aza no tena ampiasaina eto amintsika, misy ihany ireo karazana legioma sy voankazo,no tsy maintsy ampiasaina io akora simika io. Mila sasana tsara ireo akora ireo mba tsy hankarary.
Mahatonga aretina maro
Raha 12 isa ny legioma sy voankazo nohanina manta isan’andro ka tsy nosasana tsara, dia azo ambara ho efa amin’ny taha ambony ny fanafody famonoana bibikely tafiditra ao anatin’ny vatana. Mety hitarika “maladie de parkinson”, na “Alzheimer”, na homamiadana anefa io singa io, raha be loatra. Ny fanasana tsara ireo voankazo sy legioma hanina no vahaolana tsara, na dia ny 70%-n’io singa io ihany aza no afaka tamin’izany fanadiovana izany. Ho fanampin’izany, mila manadio ny ao anaty ihany koa.
· Rano mafana : lomana ao anaty rano matimaty mandritra ny 20 minitra eo ho eo aloha ny voankazo sy legioma. Kobanina in-1 mandeha vao hanina.
· Karibonetra: rarahana karibonetra 2 na 3 tsongo ao anatin’ilay rano hanasana azy. Alona kely 20 minitra vao hanina. Azo soloina ranom-boasarimakirana antsasany ny karibonetra.
· Zava-pisotro sotroina rehefa mahatsiaro: ranom-boankazo paoma 1 tasy + ranom-boasarimakirana 2 sotro fihinanana + ranona sakamalaho 1 sotro + sira vaingany ½ + rano avy amin’ny loharano ½ tasy .
Araraka ao anaty kaserôly ny rano ary avela hangotraka eo ambony afo malefaka. Raha efa izay dia araraka ao anaty vera, ka arotsaka ao anatiny ny sira vaingany. Aroina tsara mandrapahalevon’ny sira. Araraka ao avy eo ny ranona sakamalaho, ranom-boasarimakirana ary paoma. Afangaro dia sotroina avy hatrany.